सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कति ? - ramechhapkhabar.com
प्रति ताेलामा ५०० रुपैयाँले घटी ९२ हजार ३०० रुपैयाँमा काराेबार भइरहेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । अघिल्लाे दिन ९२ हजार ८०० रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियाे। तेजाबी सुनकाे मूल्य ९१ हजार ८०० रुपैयाँ ताेकिएकाे छ ।
सुनकाे मूल्यमा गिरावट आउँदा चाँदीकाे मूल्य भने स्थिर रहेकाे छ । मंगलबार प्रति ताेला एक हजार २१० रुपैयाँमा काराेबार भएकाे चाँदी आज पनि साेही मूल्यमा नै काराेबार भइरहेकाे छ।
सिभिल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप, अब कहिलेसम्म ?
सिभिल बैंक लिमिटेडले मंसिर २४ गते, शुक्रबारबाट निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थपिएकाे छ । अब उक्त ऋणपत्रमा पाैष ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
बैंकले १० वर्ष अवधिको १०.२५ प्रतिशत व्याजदर भएको ‘सिभिल बैंक डिबेञ्चर २०८८’ नाममा प्रतिकित्ता १००० रूपैयाँ अंकित दरमा ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । निष्कासन गरिएकाे कुल ३० लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये बैंकले सर्वसाधारणका लागि १२ लाख कित्ता र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न संघ संस्थालाई १८ लाख कित्ता बिक्री गर्नेछ । सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएकोमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि छुट्याईएको छ ।
बैंकको उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गरेकाे छ ।